Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, famakafakana miaraka amin'ny vidiny sy ny fiasa | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 28/08/2021 15:00 | General, hevitra
Ny vokatra an-trano mifandray amin'i Xiaomi dia nanjary malaza noho ny fifandraisana akaiky eo amin'ny kalitao sy ny vidiny, marika mampiavaka ny marika amin'ny faritra rehetra. Raha ny jiro marani-tsaina dia mety tsy ho latsa-danja izany, ary amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra iray amin'ireo vokatra malaza indrindra izy ireo.
Izahay dia mijery ny Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, jiro miovaova be izay tena mifanentana amin'ireo mpanampy virtoaly samihafa. Ny Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 dia efa eo amin'ny latabatra fandinihana ary holazainay aminao ny zavatra niainantsika miaraka amin'ity vokatra miavaka sy feno ity.
2.1 Fampidirana miaraka amin'i Amazon Alexa
2.2 Fampidirina miaraka amin'ny Apple HomeKit
3 Fikirana sy fampiasa
Ny jiro Xiaomi Mi Bedside an'ny taranaka faharoa dia manana endrika indostrialy ary mora ny mampifanaraka ny saika ny efitrano rehetra. Izy io dia manana haavon'ny 20 santimetatra sy 14 santimetatra ny sakany, famolavolana kely sy maivana izay manome antoka fa afaka manome hazavana amin'ny seho 360 degre izy. Misy mpampitohy herinaratra any aoriana ary misy mpifantina bokotra telo ho an'ny eo aloha. Manana izany amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Amazon ianao raha te hividy azy io.
Matt plastika fotsy ho an'ny fotony ary fotsy translucent ho an'ny faritra tompon'andraikitra amin'ny taratra ny jiro. Mora ny "miditra" amin'ny efitrano samihafa ny vokatra, ka tsy mila mifikitra amin'ny fampiasana azy toy ny latabatra eo am-pandriana isika.
Toy ny mahazatra, ny vokatra dia miaraka amin'ny boky fampianarana fametrahana mora azo. Voalohany indrindra dia hampifandray ny famatsiana herinaratra isika ary tohizantsika ny fametrahana ny Mi Bedside Lamp 2 amin'ny herinaratra. Tonga ho azy, tsy mila hetsika fanampiny, dia hiara-hiasa amin'ny fampiharana Xiaomi Mi Home, azo alaina ho an'ny Android sy iOS.
Raha vantany vao niditra tao amin'ny kaonty Xiaomi izahay, na nisoratra anarana (tena ilaina) raha tsy manana kaonty izahay, dia hanery ny bokotra "+" eo amin'ny farany ambony ankavanan'ny efijery. Tao anatin'ny segondra vitsy dia hiseho ilay Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 izay vao natombokay.
Mila manolotra anao tambajotra WiFi sy tenimiafinao fotsiny izahay. Mampitandrina izahay amin'izao fotoana izao fa ny Mi Bedside Lamp 2 dia tsy mifanaraka amin'ny tamba-jotra 5 GHz. Avy eo dia hanampy efitrano ao an-tranonay izahay ary koa famantaran-javatra amin'ny endrika anarana. Amin'izao fotoana izao dia manana ny Mi Bedside Lamp 2 saika tafiditra isika, saingy tsy maintsy tadidintsika fa manana fifanarahana feno amin'ny Amazon Alexa sy Google Home isika, noho izany dia hamarana ny fampidirana ilay jiro amin'ireo mpanampy virtoaly ankafizinay indrindra izahay.
Fampidirana miaraka amin'i Amazon Alexa
Mankany amin'ny "Profile" eo amin'ny zoro ambany ankavanana isika, avy eo manohy ny sehatry ny "serivisy feo" ary misafidy an'i Amazon Alexa, ao no hahitanay ireo dingana, izay ireto manaraka ireto:
Ampidiro ny rindranasa Alexa anao ary mankanesa ao amin'ny fizarana fahaiza-manao
Sintomy ny fahaiza-manao Xiaomi Home ary miditra miaraka amin'ilay kaonty mitovy izay nampifandraisinao tamin'ny Xiaomi Bedside Lamp 2
Tsindrio ny «mahita fitaovana»
Ny jironao Xiaomi Mi Bedside dia efa miseho ao amin'ny fizarana «jiro» hahafahanao manitsy izay tadiavinao
Fampidirina miaraka amin'ny Apple HomeKit
Amin'ity fotoana ity dia mora kokoa ny manaraka ny torolàlana noho ireo izay natolotray mba hifandraisana amin'i Amazon Alexa.
Vantany vao vitanao ny fizarana fikirakirana rehetra amin'ny alalàn'ny Xiaomi Home dia mandehana any amin'ny application Apple Home.
Tsindrio ny "+" kisary hanampiana fitaovana
Sakano ny kaody QR ambanin'ny fototr'ilay jiro
Hampiana ho azy ao amin'ny rafitra Apple HomeKit anao izy io
Io, ampiarahina amin'ny fifanarahan'ny Google Home, dia mahatonga ny Mi Bedside Lamp 2 ho iray amin'ireo sandan'ny smart smart indrindra vola eny an-tsena.
Fikirana sy fampiasa
Tsy lazaina intsony fa noho ny fampidirana amin'ireo Apple sy Amazon assistants samihafa dia afaka manao automatique isan'ora ianao na karazana fanitsiana mandeha ho azy tianao. Ho fanampin'izay voalaza etsy ambony, dia manana ny rindranasa Xiaomi Home izahay, ankoatra ny zavatra hafa, dia hamela antsika:
Amboary ny lokon'ny jiro
Amboary ny volon'ireo fotsy
Mamorona loko miloko
Alefaso ary vonoy ny jiro
Na izany aza, Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fanaraha-maso tsy manan-danja ihany koa isika, Satria raha ny marina, ny maha-jiro latabatra fandriana dia tsara fa manana safidy marobe amin'ny finday isika, fa ny iray amin'ireo fampiasana mahazatra indrindra dia tsy isalasalana fa ny fanitsiana tanana.
Ho an'ity dia manana rafitra mikasika eo afovoany izahay izay misy jiro LED ary manolotra anay ireo fahafaha-manao rehetra ireo:
Ny bokotra ambany dia hampandeha sy hamono ny jiro amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fikitika tokana.
Ny slider ao amin'ny faritra afovoany dia hahafahantsika manitsy ny famirapiratan-javatra mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika ary manome valiny tsara.
Ny bokotra eo an-tampony dia ahafahantsika manamboatra loko sy loko:
Rehefa manome loko fotsy izy, ny fanaovana fikitihana fohy dia hahafahantsika mifandimby ireo loko samihafa atolotra antsika avy amin'ny mangatsiaka ka hatrany amin'ny hafanana
Raha manao gazety lava isika dia ho afaka hifandimby ny maody fotsy sy ny maody miloko RGB
Rehefa manolotra ny maody miloko RGB izy dia tsindrio fohy ny bokotra eo an-tampony ka hahafahantsika mifandimby ireo loko samihafa
Ity Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 ity dia mandany 1,4 watt amin'ny fitsaharana ary 9,3 watts amin'ny asa faran'izay betsaka, ka azontsika heverina ho "fanjifana ambany" io. Raha ny fahaizan'ny hazavana dia mahita bebe kokoa noho ny ampy isika (ary mihoatra noho ny ampy) 400 Lumens ho an'ny jiro latabatra fandriana.
Ny hevitro farany momba ny Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 dia ny fahitako azy fa sarotra ny manolotra bebe kokoa vokatra azonao vidiana eo anelanelan'ny 20 sy 35 euro arakaraka ny vidin'ny varotra sy ny tolotra manokana. Izahay dia manana jiro tena mifanaraka sy miovaova ary miaraka amin'ireo fiasa izay antenainao avy aminy, sarotra ny manamarina fa tsy manana iray ao anaty trano mifandray.
Jiro eo amin'ny fandriana 2
Navoaka tamin'ny: 28 Aogositra 2021
Fanovana farany: 28 Aogositra 2021
Mila mamorona kaonty Xiaomi
Ny tsy fitovizan'ny vidiny amin'ny isa amidy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, famakafakana miaraka amin'ny vidiny sy ny fiasa